ကြောင်ကြီးသည် ကိုးကွယ်ရာမဟုတ် Holy | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Celebrity » ကြောင်ကြီးသည် ကိုးကွယ်ရာမဟုတ် Holy
ကြောင်ကြီးသည် ကိုးကွယ်ရာမဟုတ် Holy
Posted by ဦးေၾကာင္ၾကီး on Jul 16, 2012 in Celebrity, Sciences & Resources | 29 comments
အဟီး…ဘာရယ်ဟုတ်ဘူး..မိုးဗြားဂိုဏ်းသားတွေလို အပျင်းပြေ ရွာထဲမှာ ဖွကြည့်လိုက်တာ။ အကယ်၍များ မတော်တဆ ကြောင်ကြီးကို ကိုးကွယ်ဖို့ စဉ်းစားနေရင်တော့ လုပ်လက်စနဲ့ ဆက်လုပ်ကြပါလို့..။ ကြောင်ကြီးအတွက် အပန်းမကြီးပါဘူး..။ ဟောသည်ဂါထာလေးနဲ့သာ ပသဂျပါ။
ပေါ်လာလိမ် ့နိုး ။
မှောင်လေလေ ကြောင်ပွေဖြစ်မှာမို ့
မိုးကြိုးတွေပစ်ပြီး ကြောင်မျိုးပျောက်မှာ စိုးကြောက်လှပါအိ။
ကကြောင်ရေ သများအတွက် ရေကူးကန်ပါတဲ့အိမ်တလုံးလောက် ဟာဝိုင်ယီမှာ ဖန်ဆင်းပေးပါလား။ အုန်းပွဲ ငှက်ပျောပွဲနဲ့ ပူဇော်ပါ့မယ်။ ကိုးကွယ်ဆိုလဲ ကိုးကွယ်ပါ့မယ်။ အိမ်ဦးခန်းမှာတော့ နေရာမရှိတော့ဘူး နောက်ဖေးကပြင် မှာနေနော်။
အမလေး သူလိုမူးကြောင်ကြောင်ကို ဘယ်သူက ကိုးကွယ်မှာလဲ
ကြောင်ကြီးပရိတ်သတ်ကို ကိုယ့်ပရိတ်သတ်ဖြစ်အောင် တဖြေးဖြေးဆွဲခေါ်
တဲ့တဲ့ပြောရရင် ကြောင်ကြီးက ကျေးဇူးရှိတာမဟုတ်ဘူး
သူ့နာမည်ကို လိုရင်ယူသုံး ၊ မလိုရင်ချောင်ထိုးတဲ့ ကျုပ်ကမှ ကျေးဇူးရှိတာ…
ဦးပါပြောတော့လည်း ဟုတ်တုတ်တုတ် …. ဟီး
ပုစွန်စား ရာကနေ ငါးပြောင်းစား ပြီးယစ်ပူဇော်နေတယ် ခေတ်မကောင်းလို့ ကိုကြောင် ကြီးလည်း စိတ်ပြောင်းသွားတယ်ထင်ပါ့။ အလိုလေး မိုးနတ်မင်း အလိုတော်ကျ rose ကို အင်္ဂလန်ကို သွားလည်ဖို့ စီစဉ်ပေးစမ်းပါဗျာ။ ကျေးဇူးဆပ်ဖို့ ငါးရံ့ လို ကောင်မလေးတွေ ဆပ်ပါ့မယ်။ ခိခိ
ဘီအီး တစ်စည်လောက် ဖန်ဆင်းပေးတော်မူပါ အရှင်ကျောင်ရီးခင်ည
ဟုတ်တယ် ဟုတ်တယ် ဟင်းစား တွေ့တဲ့နေရာ သတ်ပြီသာမှတ်..
ဘီအီးက တစည် ။
ကိုးကွယ်ရာမဟုတ်မှန်းသိပါတယ်။ ဒါကို အရေးကြီးခွင့်ကျယ်လာပြောနေသေး။ ဥကြောင် ကြီးကတော့ မနွယ်ဘူး
ဖန်ဆင်းရှင် ဖန်သွားလေတော့သတည်း …။
ကိုကြောင်ကြီးခံတွင်းပျက်နေတယ်ထင်ပ ……. ဇရက်တောင်ပံ့ကျိုးမလေးနဲ့တွေ့စေသတည်း ……..
သင်ကြောင်စုတ် …. ခွိ ခွိ
မှားတာရှိလျှင် ဝန္ဒာမိပါ ဥကြောင် တမီးက ကဗျာစပ်ပေးလိုက်တာဘာ … အဟီး ……. အာဘွား …… ခွိခွိ
ဟယ် အူးကြောင်ကို အာဘွားပေးတယ်တော့ အဟီ မအီးပုန်းကတော့လုပ်ပြီ
U Kyaung is the creator of devil
တိုး တွယ် ရာ..သာဖြစ်သည် ။
ဒန် တန် တန်…..
ကြောင်ကို ရေ ချိုး ဆေးရိုးမီးလှုံ စပါးတောင်လို ပုံ …….။ ဟာ…….. မွှားလို့…။ ဇရက် ထော့ကျိုးလေးက တီလုပ်ပြည်က လာတာဆိုရင် ကိုကိုကြောင်း ငြင်းမှာမဟုတ်ပါဘူးနော်….။ တိနေတယ်လေ………..
ကြောင်ကြီးသာ ဖန်ဆင်းရှင်ဆိုရင်တော့ ကြောင်မချောချောလေးတွေ တောပြောင်း ဟုတ်ပါဘူး အိမ်ပြောင်းမှ နောင်ရေးအေးရတော့မယ်။
ဟီး…ဟီး စာချိုးလေးသတိရလာလို့ နောက်တစ်ခေါက်ဝင်မန့်လိုက်ဦးမယ်….
ကြောင်ဂျီးက ခရမ်းရောင်ဂျီးနဲ.ပါလား…..။မဟုတ်မှလွဲရော အုကြောင် ကျေးမလောင်နဲ.ပုံမှားရိုက်ထားတယ်တူတယ်…။
အုကြောင် တဂယ် ရောင်ချည် ထွက်ယင် လေထီးဂါဂါး ကိုအခုခေါ်ပေး….ရရင် ငါးဂျော် ခရမ်းရောင်ပူဂျော်မယ်….ဒါဗြဲ….။